Ụlọ Nche—Nke A Na-amụ Amụ | Mee 2013
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Malay Maltese Marathi Maya Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
N’oge ochie, otú ọtụtụ mba si egbu ndị omekome bụ ịkwụgbu ha n’osisi. Ndị Rom na-ekedo ụdị onye ahụ n’osisi ma ọ bụ kpọgide ya n’osisi. Onye ahụ nwere ike ịnọ ebe ahụ ruo ụbọchị ole na ole tupu ahụ́ ụfụ, akpịrị ịkpọ nkụ, agụụ, anwụ ma ọ bụ mmiri ozuzo egbuo ya. Ndị Rom weere na ụdị ahụhụ na-emenye ihere e kwesịrị ịta onye kacha kpaa arụ bụ ịkwụgbu ya n’osisi.
Ndị Izrel oge ochie hà na-eme ụdị ihe ahụ? Jehova nyere ụmụ Izrel iwu, sị: “Ọ bụrụkwa na mmadụ emee mmehie ga-eme ka a ma ya ikpe ọnwụ, e wee gbuo ya, i wee kwụwa ya n’osisi, ozu ya agaghị adị n’elu osisi abalị dum; kama ị ga-ahụ na e liri ya n’ụbọchị ahụ.” (Diut. 21:22, 23) N’ihi ya, o doro anya na n’oge a na-ede Akwụkwọ Nsọ Hibru, a na-ebu ụzọ gbuo onye a mara ikpe ọnwụ tupu a kwụwa ya n’osisi.
Ọ bụ ya mere Levitikọs 20:2 ji sị: “Onye ọ bụla n’ime ụmụ Izrel nakwa onye ọ bụla n’ime ndị mbịarambịa nke bi dị ka ọbịa n’Izrel, nke nyere Molek nwa ya ọ bụla, a ghaghị igbu ya. Ndị ala unu ga-eji nkume tụgbuo ya.” A na-egbukwa ndị “nwere mmụọ ịgba afa ma ọ bụ mmụọ ịkọ ọdịnihu.” Olee otú e si egbu ha? ‘A na-eji nkume tụgbuo ha.’—Lev. 20:27.
Diuterọnọmi 22:23, 24 kwuru, sị: “Ọ bụrụ na e nwee nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke nwoke kwere nkwa ọlụlụ, nwoke ọzọ ewee hụ ya n’obodo, ya na ya ewee dinaa, unu ga-akpọpụta ha abụọ n’ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ ma were nkume tụgbuo ha. Nwa agbọghọ ahụ ga-anwụ n’ihi na o tighị mkpu n’obodo, nwoke ahụ ga-anwụkwa n’ihi na o wedara nwunye nwoke ibe ya n’ala. Ị ga-esi otú a kpochapụ ihe ọjọọ n’etiti unu.” Otú e si egbu ndị kacha kpaa arụ n’Izrel oge ochie bụ iji nkume tụgbuo ha. *
O doro anya na n’oge a na-ede Akwụkwọ Nsọ Hibru, a na-ebu ụzọ gbuo onye a mara ikpe ọnwụ tupu a kwụwa ya n’osisi
Diuterọnọmi 21:23 sịrị: “Ihe a bụrụ ọnụ n’ebe Chineke nọ ka onye a kwụwara n’osisi bụ.” Onye omekome bụ onye “a bụrụ ọnụ n’ebe Chineke nọ.” Ihe mere ndị Izrel ji akwụwa ozu onye omekome n’osisi bụ iji dọọ ndị ọzọ aka ná ntị.
^ para. 6 Ọtụtụ ndị ọkà mmụta kwetara na a na-ebu ụzọ gbuo onye omekome tupu a kwụwa ya n’osisi dị ka Iwu Mozis kwuru. Ma, e nwere ihe gosiri na n’oge Jizọs na ndị ozi ya, ndị Juu na-akpọgide ụfọdụ ndị omekome n’osisi, ha anọrọzie ebe ahụ nwụọ.
Ajụjụ Ndị Na-agụ Akwụkwọ Anyị Na-ajụ—Mee 2013
IHE SI N’EBE ANYỊ NA-EDEBE IHE OCHIE Ha Kwụsiri Ike “n’Oge Awa nke Ule”
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE—NKE A NA-AMỤ AMỤ Mee 2013
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE—NKE A NA-AMỤ AMỤ Mee 2013
ỤLỌ NCHE—NKE A NA-AMỤ AMỤ Mee 2013
Ajụjụ Ndị Na-agụ Akwụkwọ Anyị Na-ajụ​—Disemba 2021
Ajụjụ Ndị Na-agụ Akwụkwọ Anyị Na-ajụ—Mach 2021